Iran dia nilaza fa ny fiaramanidina mpiady amerikana dia 'tandindomin-doza' ny fiaramanidina mpandeha Mahan Air
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Iran » Nilaza i Iran fa ny fiaramanidina mpiady amerikana dia 'tandindomin-doza' ny fiaramanidina mpandeha Mahan Air
Nilaza i Iran fa ny fiaramanidina mpiady amerikana dia 'tandindomin-doza' ny fiaramanidina mpandeha Mahan Air
Jolay 24, 2020
Niampanga ireo fiaramanidina mpiady amerikana ho 'tandindomin-doza' ny fiaramanidina mpandeha an'i Mahan Air i Iran
Ny haino aman-jery Iraniana dia nanambara fa ny fiaramanidina mpiady an'habakabaka amerikana dia 'nosakanana tsy amin'ahiahy' an'i Iran Mahan Air fiaramanidina mpandeha an-dalana miainga avy any Tehran mankany Beirut, ka niteraka 'ratra' ho an'ny mpandeha marobe. Ny tompon'andraikitra Iraniana talohan'izay dia nanome tsiny ny zava-nitranga, izay nitranga tany Syria, tamin'ny fiaramanidina miaramila Israeliana.
Ny Mahan Air Flight 1152 dia tao amin'ny habakabaka Syriana teo amin'ny sisintany niampitana an'i At-Tanf niaraka tamin'i Irak rehefa nosakanan'ny mpiady F-15 roa. Ny fiaramanidina akaiky dia nanery azy ireo hanova haingana ny lalana sy ny haavony, ka niteraka fahavoazana marobe teo amin'ireo mpandeha, ny solontenan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hoy izy.
Ny tatitra voalohany nataon'ny olona nahita maso tao anaty sambo dia niresaka momba ny fiaramanidina israeliana, ary naverin'ny mpampahalala vaovao iraisam-pirenena. Ny kapitenin'ny sidina 1152 taty aoriana dia nilaza tamin'ny masoivohom-baovao Iraniana Fars fa nanondro ny tenany ho Air Force amerikanina ireo mpanamory fiaramanidina nandritra ny fifandraisana tamin'ny radio.
Ny masoivohon'i Iran ao amin'ny UN Majid Takht-Ravanchi dia nampandre ny sekretera jeneraly Antonio Guterres ny zava-nitranga, ary nampitandrina fa "ny Repoblika Islamika Iran dia handray andraikitra amin'ny Etazonia" raha misy ny voina mahazo ilay fiaramanidina rehefa hiverina any Tehran, hoy izy ho an'ny mpitondra tenin'ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny Iraniana Seyed Abbas Mousavi.
Ny alakamisy hariva dia niverina soa aman-tsara tany Tehran ilay fiaramanidina, saingy farafahakeliny mpandeha telo ao anatiny no naratra tamin'io tranga io.
Ny fisakanana dia nitranga teo akaikin'ny sisintany At-Tanf niampita an'i Irak, hoy ny masoivohom-baovao SANA any Syria. Nanangana toby miaramila i Etazonia.
Mahan Air dia mpitatitra vazaha Iraniana mitokana. Napetraka tao amin'ny lisitry ny sazy amerikana hamelezana ireo “mpanaparitaka fitaovam-piadiana manapotika vahoaka sy ireo mpomba azy ireo” ny volana desambra 2019, ho an'ny fitaterana ny tafika sy ny fitaovana ho an'ny Corps Corps Revolutionaries (IRGC).
Zava-dehibe 5 tokony ho ao an-tsaina mandritra ny dia mandeha irery
Air Canada dia manomboka manokatra ny Maple Leaf Lounge